पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन : आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आषाढ २५ गते सोमबार - Taja Report
Homeराशिफलपशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन : आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आषाढ २५ गते सोमबार
पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन : आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आषाढ २५ गते सोमबार
July 9, 2018 राशिफल Comments Off on पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन : आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आषाढ २५ गते सोमबार
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग÷वारवेला,मुहूर्त र राशी श्रीसूर्य उत्तरायण,ग्रीष्म ऋतु,विरोधकृत् नाम संवत्सर,शाके १९४०,सम्वत २०७५ साल आषाढ २५ गते सोमबार नेपाल सम्बत ११३८ तछलागा,सन् २०१८ जुलाई ९ तारिक कृष्णपक्ष एकादशी तिथि अपरान्ह ५ वजेर २२ मिनेटसम्म,कृतिका नक्षत्र राती २ वजेर ३४ मिनेटसम्म, शूलयोग, बवकरण,आनन्दादियोग स्थिर,सूर्य मिथुन राशीमा,चन्द्रमा विहान ९ वजेर १० मिनेटसम्म मेष उप्रान्त वृष राशीमा ।
ॐः–राहुकालः–विहान६÷५९ वजेबाट ८÷४२ वजेसम्म रहनेछ,यमघण्टायोगः– विहान१०÷२५ वजेबाट मध्यान्ह १२÷९ वजेसम्म रहनेछ,दूरमुहूर्तः–मध्यान्ह १२÷३६ वजेबाट अपरान्ह१÷३२ वजेसम्म र ३÷२२ वजेबाट ४÷१७ वजेसम्म रहनेछ,यी अशुभ मुहूर्त मानिन्छ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷४१ वजेबाट मध्यान्ह १२÷३६ वजेसम्म रहनेछ,गुली कालः–अपरान्ह१÷५२ वजेबाट ३÷३६ वजेसम्म रहनेछ, यो सामान्य मानिन्छ ।
ॐः–सूर्योदयबाट प्रातः ६÷५९ वजेसम्म अमृत वेला,६÷५९ वजेदेखि ८÷४२ वजेसम्म कालवेला,८÷४२ देखि १०÷२५ वजेसम्म शुभवेला,१०÷२५ देखि १२÷८ वजेसम्म रोग वेला,१२÷८ देखि १÷५१ वजेसम्म उद्वेग वेला,१÷५१ देखि ३÷३४ वजेसम्म चर वेला,३÷३४ देखि ५÷१७ वजेसम्म लाभवेला र ५÷१७ वजे देखि सूर्यास्तसम्म अमृतवेला रहनेछ ।
ॐः–सूर्यास्तबाट ८÷१८ वजेसम्म चर वेला,८÷१८ वजेदेखि ९÷३५ वजेसम्म रोगवेला,९÷३५ देखि १०÷५२ वजेसम्म कालवेला,१०÷५२ देखि १२÷९ वजेसम्म लाभवेला,१२÷९ देखि१÷२६ वजेसम्म उद्वेग वेला,१÷२६ देखि २÷४३ वजेसम्म शुभवेला,२÷४३ वजे देखि ४÷० वजेसम्म अमृत र ४÷० वजे देखि सूर्योदयसम्म चर वेला रहनेछ ।
लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । धन माग्ने वहाना धेरै हुनसक्छन् सतर्क हुनु होला । कुरा भन्दा काम गरेर देखाउने बेला आएको छ । आन्तरिक कुरा कसैलाई नखोल्नु होला ।
मध्यान्ह पछि समयमा क्रमिक सुधार आउनेछ ।कार्य लगनशिलता बढ्नेछ । अबरुद्ध काम अगाडि बढ्ने छन् । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । व्यापार बढ्नेछ । उत्तम भोजन र आसन प्राप्तिको योग देखिन्छ ।
पाइला पाईलामा विचार पु¥याउनु होला । आर्थिक कारोवारहरु विग्रिन सक्छन सचेत रहनु होला । स्वास्थ्यमा लगानी बढ्नेछ । अनावस्यक खर्च वृद्धिले आर्थिक समस्या झेल्नु पर्नेछ ।
नसोचेका ठाँउबाट धन आउन सक्छ । गरेका कामबाट लाभ लिन सकिने छ । औषधि चिकित्सा जस्ता व्यापार व्यवसायबाट मुनाफा हुने छ । ऋण लगानी भने नगर्नु होला ।
खर्च मात्रै गरेर काम सफल गर्छु भन्ने मानसिकता त्याग्नु होला । गरेका काममा सोचे भन्दा राम्रो प्रगति हुनेछ । पुराना काम फस्र्योट हुने छन् । पेशा परिर्वतनको चाहान बढ्न सक्छ ।
इज्जत प्रतिष्ठामा आच आउन सक्छ । अनावस्यक विषय बस्तुमा चासो नदिनु होला । अरुका काम गरेर पुण्य कमाउछु भन्ने मान्यता गलत सवित हुन सक्छ । विश्वासको संकट पर्न सक्छ ।
काममा अवरोध आउनेछ । नोकरीमा पनि समस्या नआउलान् भन्न सकिन्न । भौतिक सुखमा कमी आउनेछ । संचित धनको नास हुनेछ । वित्तिय कारोवारमा गिरावट आउनेछ ।
रजोगुण बढ्नेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुने देखिन्छ । स्वतन्त्र व्यापारबाट सामान्य लाभ हुन सक्छ । विदेश यात्राको सम्भावना प्रवल देखिन्छ । नोकरी तथा राजनीतिमा अवसर आउनेछ ।
विरोधीसँगको मुद्धामा विजय पं्राप्त हुनेछ । खेलाडीको लागि दिन अनुकुल छ । कार्य योजना बनाएर मात्र काममा प्रवेश गर्नु होला । विना तयारी काममा लाग्नु भयो भने दुख धेरै पाईने छ ।
अन्योलता बढ्ने छ । भ्रमलाई चिरेर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । आवेगमा आएर कुनै निर्णय नलिनु होला । काममा सानातिना समस्या आउने छन् । अरुको भर विश्वासमा काम नगर्नु होला ।
घरको बातावरण खलबलिन सक्छ । घर छोडेर अन्तै जान मन लाग्ने छ । उतार चढावको सामना गर्नु पर्ला । स्वस्थ्यमा समस्या आउने छ । समयमा सोच्न सक्नु भएन भने क्षति धेरै हुनेछ ।
काम प्रतिको चासो बढ्नेछ । उच्चमनोबलका साथ काममा लाग्दा अवस्य सफलता मिल्नेछ । उद्योग धन्दाबाट लाभ लिन सकिनेछ । कुनै कुराको तुरुन्तै प्रतिक्रिया नदिनु होला आफैलाई घाटा हुनेछ ।
फेरी दुबई बाट बेचिएकी नेपालि चेली रुदै रबि दाई बचाऊ भन्दै आईन लाईभ मा ( भिडियो सहित ) सक्दो सेयर गरेर रबि लामिछाने सम्म पुराउन मद्दत गरौ..